सांसदको यस्तो कडा प्रश्नले हल्लिए ओली-प्रचण्ड, अरू सांसदहरू भने तिनछक — Sanchar Kendra
सांसदको यस्तो कडा प्रश्नले हल्लिए ओली-प्रचण्ड, अरू सांसदहरू भने तिनछक
काठमाडौं । सरकारले छाउगोठ भत्काएको भन्दै संसदमा विरोध भएको छ । जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद गजेन्द्र महतले छाउगोठको नाममा आफूहरुका घर भत्काएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिको मृ त्यु भयो भन्दैमा घर भत्काउन पाइन्छ ? आठ जना मान्छेको एउटा होटलमा मृत्यु भएको छ, होटल भत्काउँदै हिँड्ने ? हजारौं मान्छेको बसमा मृ त्यु भएको छ, बस आगो लगाउँदै हिँड्ने ?’
छाउगोठ भत्काएर सरकारले नचाहिँदो काम गरेको उनले बताए । हिजो गोर्खाली सेनाको नाममा हाम्रा घर भत्काइयो, अहिले छाउगोठको नाममा हाम्रो घर भत्काउने ? के हेरेर बस्या छ गृहमन्त्रालय ? काम पा’छैन यसले ?’ उनले प्रश्न गरे । छाउगोठ भत्काउनु भन्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
‘जिल्लामा नुन बेचिएको छ, औषधि बेचिएको छ, त्यत्रो भ्रष्टाचार छ, उनीहरुलाई सम्हाल्नु छैन,’ सांसद महतले भने, ‘पुलको बेहाल छ, बाटोको बेहाल छ, ठेकदार कहाँ छ कहाँ छ थाहा छैन, तिनलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ? स्कुलको अवस्था केछ, हस्पिटलको अवस्था केछ ? त्यो हेर्नुपर्दैन ?’
पश्चिम नेपालका कतिपय जिल्लाहरुमा महिनावारी भएका महिलाहरुलाई छाउगोठमा राख्ने चलन छ । छाउगोठमा बसेकै अवस्थामा कतिपयको मृत्यु हुन थालेपछि सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले छाउगोठ भत्काए पनि स्थानीयले फेरि पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आज (शुक्रबार) बसेको बैठकले केही संसदीय समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ बमोजिम गठित विभिन्न समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गरेका हुन् ।
सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को मुद्दा जोडतोडले उठेको छ । दुवै अध्यक्षको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकको सुरुकै दिन बुधबार (माघ १५ गते) पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे एक शब्द छैन ।
तर, बुधबार नै बैठक उद्घाटन सत्रमा दुई घण्टा लामो मन्तव्य राखेका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसीको पृष्ठभूमिसहित यसको औचीत्य पुष्टी गर्ने पूरै कोशिष गरे। त्यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीबारे बुझेरमात्रै बोल्न नेताहरुलाई चेतावनी दिए।
नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमै एमसीसीलाई लिएर नेताहरुको मत फरक–फरक छ। त्यसैले पुस ६ गते सकिएको स्थायी समिति बैठकले एमसीसीबारे अन्तिम निर्णय लिन सचिवालयलाई जिम्मा दिए पनि यसबारे निर्णय हुन सकेको थिएन। पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर एकरुपता नभएका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो चेतावनी आएको थियो।
नेकपा बैठक : ‘न पार्टी कम्युनिस्ट जस्तो भयो, न सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो’
काठमाडौंमा जारी नेकपा केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकमा शुक्रबार पाँच समूहका नेताहरुले समूहगत रिपोर्ट पेस गरेका छन् । १५ वटा समूह बनाएर गरिएका छलफलमा दुई अध्यक्षका तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा र विधान संसोधनमा केन्द्रीत थिए ।
राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषयलाई पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएका छन्। १५ समूह मध्ये समूह२, समूह६, समूह९ र समूह१३ का नेताले समूहगत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। बाँकी ११ वटा समूहले शनिबारको बैठकमा समूहगत रिपोर्ट पेस गर्नेछन्।
समूह २– चीनलाई ‘घेरा हाल्ने’ शब्द किन?
समूह २ को नेता कमला रोकाले समूहगत छलफलपछि बैठकमा पेस गरेको रिपोर्टमा निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्ने माग सो समूहमा केही सदस्यहरुले राखेका छन्। अध्यक्षको प्रतिवेदनमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको व्याख्या गर्ने क्रममा ‘चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी रणनीती’ भनिएकोमा यो वाक्यबाट ‘घेरा हाल्ने’ लाई हटाउनु पर्ने पनि केही सदस्यहरुको माग छ।
यस्तै, राष्ट्रियसभा निर्वाचन र सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने, अन्य पार्टीहरुको चरित्र चित्रणमा गरिएको वर्ग विश्लेषण नमिलेको, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा जानका लागि छलफल जारी राख्ने तथा यसका लागि चरणबद्ध योजना बनाइयोस् भन्ने माग पनि सदस्यहरुले उठाएका छन्।
विधानमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष थपिएजस्तै जिल्ला र अन्य समितिमा पनि उपाध्यक्ष र सचिव थप गर्नुपर्ने माग पनि सो समूहमा उठेको छ। पार्टीको सदस्यता शुल्क महँगो भएको भन्दै घटाउनु पर्ने, पार्टीका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागकाे विषय पनि समूहमा उठेको छ।
नेकपाका उपल्ला कमिटीहरुमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छैन। ९ सदस्यीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला छैनन् भने स्थायी समितिमा जम्मा दुईजना अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुषालमात्र छन्। यस्तै एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्न नहुनेपनि अधिकांश सदस्यहरुको मत थियो।
छलफलमा केही सदस्यले पार्टी दलाल, नोकरशाही र पुँजीवादीहरुको जस्तो भएको धारणा राखेका थिए। ‘न पार्टी कम्युनिस्टको जस्तो भयो न सरकार कम्युनिस्ट पार्टीकोजस्तो। सरकार पूर्णरुपमा पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ,’ समूह दुईको छलफलमा केही सदस्यले भनेका थिए। यस्तै पोलीटब्युरो गठन हुनुपर्ने माग पनि सो समूहमा उठेको थियो।
समूह ९– होलटाइमरलाई खर्च चाहियो
समूह ९ की नेता भगवती चौधारीले समूहगत छलफलपछि बैठकमा पेस गरेको रिपोर्ट अनुसार पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता (होलटाइमर) लाई खर्चको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सदस्यहरुले उठाएका छन्। यस्तै केन्द्रीय समितिको ब्यानरमा मार्क्स र लेनिनको फोटो राख्नुपर्ने माग पनि एक सदस्यले गरेका थिए।
हालै केही मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाइएकोमा पार्टी नेतृत्वले केन्द्रीय समितिमा त्यसको कारण खुलाउनु पर्ने आवाज पनि छलफलमा सदस्यहरुले उठाए। ‘जनयुद्ध’ का घाइते तथा अपांगहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने मागका साथै जिल्ला कमिटीका सदस्यहरुको वरियता तोक्ने माग पनि छलफलमा उठेका छन्।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु भ्रष्ट भएको भन्दै तिनको अनुगमन संयन्त्र पार्टीले नै बनाउनु पर्ने, पार्टीमा उमेर हदलाई कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्ने माग पनि केही सदस्यहरुले गरेका छन्। सरकारले संसदमा पेस गर्ने विधेयकहरुबारे पहिले पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने धारणा केही सदस्यहरुले राखेका थिए।
समूह ६– नेताहरुको अकुत सम्पति छानबिन होस्स
मुह ६ का नेता दिनानाथ शर्माले बैठकमा समूहत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए। यो समूहमा अधिका‌ंश सदस्यले एमसीसी भनेको के हो? प्रशिक्षण आवश्यक भयो भन्ने कुरा राखेका थिए। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पार्टी योजनामा परिचालन गर्नुपर्ने र सबै ठाउँमा राजनीतिले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा नभएको भन्दै केही सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सबै कमिटीहरुमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने र सबै कमिटीमा बहुपद हुनुपर्ने मागपनि गरेका छन्। यस्तै शीर्ष नेताहरुले गुट भत्काउनुपर्ने र आत्मालोचनाको पद्धति बसाल्नुपर्ने धारणा अधिका‌ंश सदस्यले राखेका छन्। सबै नेताहरु पार्टी नीति विपरित बोल्न नहुने र सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषय उठेको छ।
मूलतः विधान र प्रतिवेदन ठीक भएको पनि केही सदस्यको धारणा थियो। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको थियो। यस्तै आर्थिक प्रतिवेदन खोई भनेर पनि सदस्यहरुले प्रश्न गरेका थिए। पार्टीमा अकुत सम्पति कमाउनेलाई छानबिन आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्ने, पार्टी एकता र जनवर्गीय संगठनको एकतालाई छिटाे टुङ्ग्याउनुपर्ने, पूर्णकालिन कार्यकर्तालाई भरणपोषण दिनुपर्ने माग पनि सदस्यहरुले राखेका छन्। यस्तै पार्टी लेबी मिनाहा गर्नुपर्ने पनि धारणा केही सदस्यले राखेका थिए।
समूह १३–भ्रष्टचार रोकिएन कारबाहीको तहमा जाऔं
समूह नेता लेखनाथ न्यौपानेले समूहगत छलफलपछि बैठकमा पेस गरेको रिर्पोटमा भ्रष्टाचार नरोकिएको र अब कारबाहीको तहमा जानुपर्ने केही सदस्यले राखेका थिए। नेतृत्वले नै गुटको नेतृत्व गरेको भन्दै सोही गुटले पार्टी सकिन लागेको, पार्टीको घोषणापत्र अनुसार काम भए नभएको समीक्षा हुनुपर्ने माग पनि सदस्यहरुले राखेका छन्। बाहिर सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने तर भित्र निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने प्रस्ताव पनि यो समूहमा आएको छ।
नेपाली मौलिकताको समाजवादबारे बहस गर्नुपर्ने सदस्यहरुले राखेका थिए। यस्तै सांस्कृतिक विचलनले पार्टीलाई गैरकम्युनिस्ट बनाउँदै गएको, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने, अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अधिका‌ंश सदस्यले छलफलमा भनेका थिए।